Wasiiradii Ugu Badnaa Ee Suudan Oo Iscasilay+Tiradooda Iyo Xaaladda Sudan Oo Wali Qasan
Tuesday 23rd November 2021 16:21:53 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe
Hargeysa(KarinNews) Laba iyo toban wasiir, oo uu ku jiro wasiirrkii arrimaha dibadda ee Sudan ayaa iscasilay dhamaantood,kadib markii dhawaan ay heshiis wada gaadheen raysal wasaaraha Sudan Hamdok Iyo Militerigii iskudayga afgambi sameeyey.
Axadii, todobaadkan Mr Hamdok ayaa dib xorriyadiisii loogu soo celiyey ka dib markii uu heshiis siyaasadeed la saxiixday madaxa golaha militariga, General Abdel Fattah al-Burhan, si loo soo afjaro qalalaasaha toddobaadyo socday ee lagaga soo horjeeday in xukunka dalkaasi uu gacanta u gallo Militeriga,taas oo ay shacabku si wayn uga soo horjeedeen.
Wasiiradan xilalkoodii ay qaranka u hayeen tiriyey si loo badbaadiyey dalka Sudan,kan amid ahaa kuwa ugu tunka waynaa xukuumaddii rayidka ahayd ee Sudan ayaa waxa kamid ah wasiirada wasaaradaha arrimaha dibada, cadaaladda, Beeraha, Waraabka, Maalgashiga, Tamarta,Waxbarashada, Shaqada,Gaadiidka, caafimaadka, dhalinyarada iyo waliba arrimaha diiinta. Waxaana dhamaantood istiqaaladooda ay u gudbiyeen raysal wasaaraha Sudan oo lagu amarey sida heshiisku dhigayay inuu kala dareeriyo xukuumadiisa, mid cusubna uu soo dhiso.
Heshiiskaasi wallow ay si wayn beesha caalamku usoo dhaweeyeen, hadana dadka u ololeeya arrimaha dimuqraadiyadda ayaa ku baaqaya in aan golaha cusub ee xukuumadda Sudan aan lagu soo darin Militeri si aan loo wiiqin mustaqbalka Sudan, sida ay baahisay Al-jasiira. Waxaana la sheegay in wasiiradan xilalka tiriyey ay marar kala duwan istiqaaladooda soo gudbiyeen.
Dowladdan xilka laga tuurey, wasiiradeediina lagu qasbay inay is wada casilaan ayaa ahayd mid ku meel gaadh ah oo ka koobnayd rayid iyo saraakiil Ciidan. Waxaana la dhisay ka dib heshiis awood qeybsi ah oo la isku raacay ka dib afgambigii xilka lagaga tuurey Cumar Al-Bashiir sanadkii 2019-kii.
Heshiiskii 14-ka qodob ahaa ee dhexmaray Xamdook iyo ciidamada ayaa sidoo kale dhigaya in la sii daayo dhammaan maxaabiista siyaasadeed ee u xiran afgambiga iyo arrimaha siyaasadeed, waxaana uu dhigayaa in dastuurku uu saldhig u noqdo isbeddel siyaasadeed, sida lagu sheegay tafaasiil laga akhriyay telefishinka dowladda.
Raysal wasaare Hamdok, oo xabsi guri ku jiray tan iyo afgambigii bishii la soo dhaafay, ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Al Jazeera ku sheegay in uu saxiixay heshiiska maadaama ay wataan mas’uuliyadaha la saaray garbihiisa.
Si wayn ayaa loo hadal hayaa saacadihii u danbeeyey iscasilaada wasiiradan, waxaana laga dhursugayaa dhinaca ay u badan doonto xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo raysal wasaare Hamdook oo dib xilka loogu wareejiyey kadib xabsi guri la galiyey markii afgambigu dhacay.
Warkan waxaan kasoo xiganaya Al-jazeera News, waxaana Turjuntey shabakada wararka ee Karinnews
Al-shabaab Oo Dab Qabadsiiyey Guryo Dad Shacab Ah Lahaayeen Oo ku Yaala Shabeelada Dhexe + Dadkii Oo Qaxay Iyo Xaaladda
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaaladda Boqor Buurmadow Iyo Hanjabaddii Cuslayd + Xaaladda Taagan
[ DEG DEG ]"Wali Dhaqankii Dadkeenu Ismuu Badalin waana...." Maayar Mooge
"Xaaladda Kulmiye Iyo Duruufaha Siyaasaddeed ee ku Gadaaman Maxamed Kaahin Iyo Xasan Gaafaadhi " W/Q. Mustafe
[ Akhriso:-] Aqoonyahanada Reer Somaliland Oo Wali La Yaaban Waddani + Canaan Dusha Laga Huwiyey Kulmiye Iyo Ucid.